RASMI: Ciyaatoyda u sharraxan abaal-marinta xiddiga bisha April ee horyaalka Premier League oo lagu dhawaaqay – Gool FM
(England) 30 Abriil 2019. Waxaa la shaaciyey ciyaartoyda ku tartami doona abaal-marinta xiddiga ugu fiicnaa horyaalka Premier League bishan maanta gabagabada ah ee April.
Maamulka horyaalka Premier League ayaa goordhow shaaciyey siddeeda ciyaaryahan ee ku tartami doona abaal-marinta xiddiga bisha April ee horyaalka Premier League, waxaana ka soo muuqday Hazard, Henderson iyo Salah.
Codeynta lagu dooran doono ciyaaryahanka bisha waxaa qeyb qaadan doona kabtannada 20-ka kooxood ee Premier League waxaana guuleysta go’aansan doona qubaro kubadda cagta ah, kaasoo lagu dhawaaqi doono dhammaadka isbuucaan.
Haddaba halkaan hoose ka eeg siddeeda xiddig ee ku tartami doona abaal-marinta bisha April ee horyaalka Premier League:-
Xiddiga xulka qaranka Belgium ayaa saddex gool dhaliyey labo kalena caawiyey, waxaana ku jiray goolkii cajiibka ahaa ee uu ka dhaliyey kooxda West Ham United, kaasoo sidoo kale u tartamaya abaal-marinta goolka bisha April ee Premier League.
Jordan Henderson (LIV)
Kabtanka kooxda Liverpool ayaa dhaliyey ama ka caawiyey kooxdiisa saddex gool afartii kulan ee la ciyaaray bisha April, taasoo kooxdiisa ka gacan siisay inay cadaadis ku saaraan Manchester City tartanka loogu jiro hanashada horyaalka Premier League.
Aymeric Laporte (MCI)
Difaacaan ayaa ciyaaray daqiiqad kasta oo ay dheeshay kooxdiisa Man City, waxaana uu hastaa rikoor boqolkiiba boqol ah bisha April, City ayaana laga dhaliyey kaliya hal gool iyadoo shabaqeeda gool ka ilaashatay afartii kulan ee ay dheeshay bisha April, Laporte ayaana sidoo kale gool caawiyey kulankii ay ka horjeedeen Cardiff City.
Long ayaa gool dhaliyey saddex kulan oo xiriir ah oo kooxdiisu ku ciyaartay garoonkeeda, waxaana uu sidoo kale shabaqa gaarsiiyey goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa taariikhda horyaalka Premier League isagoo ku dhaliyey 7.69 ilbiqirsi kulankii ay kooxdiisa Southampton barbaraha la gashay Watford.
Ayoze Perez (NEW)
Perez ayaa wacdaro ka dhigay bisha April horyaalka Premier League, waxaana uu kooxdiisa Newcastle United ka badbaadiyey inay u dhacdo heerka labaad ee Ingiriiska.
Xiddiga xulka qaranka Masar ayaa bisha April soo gabagabeeyey isagoo dhaliyey labo gool isla markaana mid kale caawiyey kulankii ay ka horjeedeen Huddersfield Town waxaana uu haatan tartan ugu jiraan kabta dahabka ah ee gooldhalinta horyaalka Premier League, sidoo kale goolkii uu ka dhaliyey kooxdiisii hore ee Chelsea ayaa ka mid ah goolasha u tartamaya goolka ugu quruxda badan ee horyaalka laga dhaliyey bisha April.
Vardy ayaa bandhig wanaagsan ka sameynaya ka hoos ciyaaridda macallinka cusub ee naadiga Liecester City, Brendan Rodgers xiddigan reer England ayaana gooldhaliyey dhammaan kulamadii uu ciyaaray bisha April, waxaana ku jiray labadii gool ee uu ugu shubay Arsenal, taasoo uu ku soo tiigsaday inuu 18 gool dhaliyey xilli ciyaareedkan.
Wood ayaa gacan ka geystay shan ka mid ah todoba gool oo ay kooxdiisa Burnley dhalisay bisha April.
Xiddiga ku guuleysta abaal-marintan ayaa lagu dhawaaqi doonaa Jimcaha soo aaddan oo ay taariikhdu tahay 3 bisha May sanadkan 2019.
Eight 🌟 players in April
Imise lacag ah ayuu Paul Pogba ku iibiyey Kabihii uu ku ciyaaray kulankii kama dambeysta ahaa ee Final-kii Koobkii Adduunka 2018?